तिथि मेरो पत्रु » तपाईं एक कुकुर संग एक केटी तिथि पर्छ किन
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: अक्टोबर. 24 2020 |3मिनेट पढ्न
पल म एउटा अचम्मको महिला सम्बन्ध छु. त्यो सुन्दर छ, बौद्धिक र नारीलाई. त्यो म कहिल्यै लागि सोध्न सक्छ सबै छ. कहिलेकाहीं मलाई annoys भन्ने मात्र कुरा सधैं डाह प्राप्त गर्न शुरू उनको सानो कुकुर छ, जब म चुम्बन वा उनको cuddle.
म अर्थ, म कुकुर जस्तै र म पनि मेरो आमाबाबुको ठाउँमा बस्ने तर म अझै पनि उसलाई कुकुर को भौंकने देखि एक कर्णक्ष्वेड धरापमा नपारी म उनको चुम्बन गर्न सक्नुहुन्न भन्ने तथ्य नाराज प्राप्त एक कुकुर छ. म पनि सानो कुरा घृणा गर्न सुरु, म भनेर बुझे सम्म उहाँ हाम्रो खुसी सम्बन्ध गर्न प्रमुख हुन सक्छ.
म यो पूर्णतया पागल सुनिन्छ, तर ठेगाना अधिक म व्यक्तित्व लक्षण र मेरो प्रेमिका को गुणहरू विचार, अधिक मैले सोचेभन्दा उनको कुकुर उनको एक धेरै अधिक प्रभावित हुन सक्छ भनेर बुझे.
म पनि त्यो उनको अर्को पक्षलाई हेरचाह गर्न अनुमति तरिकामा खडा गरिएको थिएन भने मेरो प्रेमिका हुनेछ कसरी कल्पना. म उनको कुकुर सारा भौंक रोक्न गर्दैन जब यो अझै पनि मलाई annoys तापनि कि निष्कर्षमा पुगे, म उनको बन्न मदत सिद्ध मानव लागि उहाँलाई धन्यवाद छ. म अन्ततः बुझे कि एक केटी संग प्रेम मा गिरने जो एक कुकुर सर्वोत्तम निर्णय म कहिल्यै गरेका छन् सक्छ थियो छ.
त्यो जिम्मेवारी मा ले सिके
कहिलेकाहीं म छोराछोरी आजकल आफ्नो आमाबाबुले हुर्काउने भन्ने भावना छ, बरु आफ्नो आमाबाबुले खडा गर्दाका. कि को फलस्वरूप तिनीहरूले जिम्मेवारी एक अर्थमा विकास गर्ने मौका प्राप्त छैन, कसैले तिनीहरूलाई सिकाउँछ किनभने यो केहि या कुनै लागि जिम्मेवार हुन अर्थ के हो.
तपाईं पत्ता भने तपाईं डेटिङ गर्दै केटी जिम्मेवारी बिल्कुल कुनै अर्थमा छ कि, त्यो शायद एक कुकुर कहिल्यै. स्वतः एक कुकुर संग बढ्छ जसले एक महिलाले अर्को जातिको लागि जिम्मेवारी लैजान सिक्छ.
त्यो हिंड्न छ, तिनले उसलाई खुवाउन छ र उहाँ बिरामी छ जब पशुचिकित्सा उसलाई लिन छ. ती सबै कुराहरू जिम्मेवारी एक अर्थमा आवश्यकता. तपाईं अर्को जातिको लागि जिम्मेवारी यस अर्थमा छ जो एक केटी डेटिङ गर्दै गर्दा, यो मानव जाति को लागि आउँदा तपाईं पनि जिम्मेवारी उनको अर्थमा पनि ठूलो छ कि यकीन हुन सक्छ.
यदि तपाईं कहिल्यै स्त्री संग एक परिवार शुरू सोच्न, तपाईं राम्रो जिम्मेवारी एक अर्थमा छ जो एक केटी संग सम्बन्ध मा अन्त गर्नुपर्छ.
तपाईं त्यो एक हेरविचार व्यक्तित्व छ पक्का हुन सक्छौं
तपाईं सम्बन्ध पुरुषको खुसी तुल्याउँछ नम्बर एक कुरा थाह छ? के छैन, हामी एक सम्बन्ध बाहिर प्राप्त आशा नम्बर एक कुरा सेक्स संग के गर्न केही छ. के हामी चाहन्छौं हामीलाई वास्ता गर्ने एक महिला छ. मान्छेहरू चिन्ता व्यक्तित्व छ जो महिलाहरु चाहनुहुन्छ.
यो हामी एक सम्बन्ध राजा जस्तै व्यवहार गर्न चाहनुहुन्छ कि misbelief संग गर्न केही छ. हामी चाहन्छौं सबै हामी संग सँगै हुन्छन् केटी साँच्चै हाम्रो ख्याल राख्नुहुन्छ भनेर महसुस गर्न छ. कुनै पनि अन्य केटी भन्दा तिम्रो हेरविचार गर्न अझै इच्छुक छ जो केटी को एक प्रकार छ भने, त्यसपछि यो एक कुकुर छ जो एक केटी छ.
एक कुकुर को हेरविचार समय र धैर्य चाहिन्छ. म एक कुकुर थियो र जो मायालु व्यक्तित्व थियो छैन जो एक महिला कहिल्यै भेट गरेका छन्. चाहनुहुन्छ तिमी एक सम्बन्ध मा अन्त गर्ने केटी अन्य प्राणीहरू को हेरविचार पक्का लिन बनाउन, तपाईं सहित.
त्यो एक काउच आलु छैन
म खेल बारे धेरै भावुक छु. म टहलना जाने र ताजा हावा मा हुन प्रेम. कारण मेरो भिटामिन डी स्तर कम र कम हुन्छ, जबकि म टेलिभिजन अगाडि सबै दिन खर्च चासो छैन भन्ने तथ्यलाई गर्न, म पनि एक ओछ्यान आलु डेटिङ मा चासो छैन.
तपाईं डेटिङ गर्दै केटी एक कुकुर छ भने, तपाईं त्यो अल्छी ओछ्यान आलु तर केहि छ कि एकदम पक्का हुन सक्छौं. तपाईं सबै तल्ला मा कुकुर poop छ चाहँदैनन् भने, तपाईं एक दिन आफ्नो कुकुर संग कम से कम दुई पटक हिँड्नुपर्छ.
म एक कुकुर छ जो एक केटी बरु सक्रिय हुनुको बाहिर उनको समय खर्च गर्दछ तपाईंलाई ग्यारेन्टी, सट्टा ओछ्यान मा उनको समय बर्बाद को. म मेरो प्रेमिका गरेको कुकुर द्वारा नाराज छु तापनि उहाँले सारा भौंक रोक्न गर्दैन जब, हामी उहाँसित पैदल लिन जब म यो आनन्द उठाउन.